यसकारण नेमकिपा तटस्थ - Online Majdoor
यसकारण नेमकिपा तटस्थ
– सुरेन्द्रराज गोसाई
हामीले राजनीतिशास्त्रमा पढेका थियौँ – फ्रान्समा एउटा यस्तो स्थिति आएको थियो, राति सुत्दा एउटा सरकार र बिहान उठ्दा अर्को सरकार । फ्रान्सको त्यो दुर्गति पुँजीवादी दलहरूबीचको झगडा अहिले नेपालमा देखिँदै छ । नेपालको सिमानामा बस्ने नेपाली दाजुभाइहरूको अवस्था भने फरक छ ः रातिसुत्दा नेपालमा, बिहान उठ्दा भारतमा । आज हामी यो सदनमा अर्को चित्र देख्दै छौँ । दसैँ–तिहार अगाडि एउटा पङ्क्तिमा बस्ने सांसदहरू दसैँ–तिहार मनाएर आइसकेपछि अर्को पङ्क्तिमा हुनुहुन्छ । हामी यो अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौँ । यो पदको झगडा र कुर्सीको लडाइँमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी सुरुदेखि नै टाढा रहँदै आएको सबैलाई थाहा छ । अहिलेको यो झगडामा पनि शासक दलहरूबीचको कुर्सीको तानातानमा नेमकिपा टाढा रहन्छ । नेमकिपाले कुर्सीको तानातानमा सदा टाढा बस्छ । बरु, हामी नेपाली जनतासँग बस्न चाहन्छौँ र नेपाली जनताको आवाज सदनमा पनि मुखरित गर्न चाहन्छौँ । हाम्रो पार्टीले विगत ३० वर्षदेखि अर्थात् बहुदल पुनःस्थापनासँगसँगै यो अभिभारा बहन गर्दै आइरहेको जगजाहेर नै छ ।
शासक दलहरूको यो झगडामा जनताको हित कहीँ कतै देखिँदैन । बजारमा महँगी बढेको बढ्यै छ । सहरबजारमा आतङ्क छ । जता हे¥यो उतै अस्तव्यस्त छ । त्यो अस्तव्यस्त समाधान गर्ने, महँगी नियन्त्रण गर्ने र नेपाली जनतालाई शान्ति–सुरक्षा दिने विषयहरूमा यहाँ कोही शासकहरू बोलिरहेका छैनन् । त्यसको ग्यारेन्टी दिने खालका प्रतिबद्धताहरू यहाँ सुनिएको छैन । त्यो खालको तयारी भइरहेको छैन । खालि पदको भागबन्डा । पदको भागबन्डा प्रजातन्त्र होइन । यसले त प्रजातन्त्रको बदनाम गर्दै छ । प्रजातन्त्रको भावनाबमोजिम शासक दलहरू नचलेका हुनाले त्यो झगडामा हामी सामेल हुन चाहँदैनौँ ।
अझै पनि कोरोनाको आतङ्क कायमै छ । कोभिडको महामारी नियन्त्रण गर्न शासक दल या सरकारले सक्रियता देखाइरहेका छैनन् । यसकारण, अनाहकमा नेपाली जनताको ज्यान जाने क्रम अभैm जारी छ । त्यस विषयमा शासक दलहरू र सरकार बोलिरहेका छैनन् । यसमा पनि हाम्रो आपत्ति छ । हिजोका सरकारहरूले गरेका अनियमितता, भ्रष्टाचार, पक्षपात नियन्त्रण हुने हो कि हैन ? त्यसबारेमा पनि यहाँ चुँ बोलिँदैन ।
शासक दलहरूको भित्री झगडाको मूल कारण के हो ? त्यसबारे नेपाली जनता जान्न चाहन्छन्, बुभ्mन चाहन्छन् । त्यसबारे अभैm यथार्थ कुरा बाहिर आएको छैन । त्यसकारण, जबसम्म त्यो वास्तविकता बाहिर आउँदैन तबसम्म हामीले कसलाई किन विश्वास गर्ने ? विदेशीहरूले चलाइराखेको हो कि अथवा कुनै प्रतिक्रियावादी ताकत अथवा तत्वहरूले चलाइराखेको हो कि ? यो झगडाको निम्ति को जिम्मेवार छ ? यी विषयमा कमसेकम हामी अवगत छैनौँ । यी विषयमा नेपाली जनता जान्न चाहन्छन् र जान्ने अधिकार नेपाली जनतासँग छ । यस विषयमा शासक दलहरूले समयमै प्रस्ट पार्न आवश्यक छ । प्रदेशमा जुन किसिमको अनियमितता भइरहेका छन् अर्थात् सुस्तता छ, त्यो सुस्तता तोड्ने खालको प्रतिबद्धता कहिले आउँछ ? कसले दिने ? अहिलेको सरकारले दिइरहेको अवस्था छैन हामीलाई त्यसबारे जानकारी दिइएको छैन ।
अहिले जताततै भाँडभैलो छ । यसबाट जनता त छोडिदिउँ यहाँ उपस्थित सांसदहरू स्वयम् सन्तुष्ट हुनुहुन्न । यो रीति, यो बेथिति अन्त्य गर्ने कुनै पनि खालको सुनिश्चितता, प्रतिबद्धता अभैm आएको छैन । त्यसकारण, शासक दलहरू, पुँजीवादी दलहरूको यो कुर्सीको तानातान, कुर्सीको हानाहान, पदको झगडा, प्रजातन्त्रमाथिको घातबाट नेमकिपा टाढा बस्न चाहन्छ । देशघाती एमसीसीका कारण देशले नयाँ सङ्कट बेहोर्दै छ । देशमा नयाँ भाँडभैलो थपिँदै छ । देशको अस्तित्वमाथि नै खतरा आउँदै छ । त्यस विषयमा पनि शासक दलहरूले नबोलेको हुनाले नेमकिपा यो झगडाभन्दा टाढा बस्न चाहन्छ । जबसम्म एमसीसीजस्तो देशघाती सम्झौताको विषय उठाइँदैन, तबसम्म यस विषयमा हाम्रो विरोध जारी रहनेछ । नेमकिपाले विगत लामो समयदेखि नै प्रखर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको जगजाहेर छ । आजको यो विश्वासको मतको सन्दर्भमा नेमकिपा तटस्थ रहने जानकारी गराउन चाहन्छु ।
(कार्तिक २२ गते बाग्मति प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले राख्नुभएको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा भएको छलफलमा नेमकिपाका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य सुरेन्द्रराज गोसाईले राख्नुभएको विचारको सम्पादित अंश–सं)
एमसीसीविरुद्ध देशव्यापी अभियान चालु, धादिङमा जुलुस र सभा